Ikliniki Ye-Mayo Faq
Igama lesiqhelo: ijeli yokuthambisa
Amagama eBrand: KY Liquibeads Vaginal Moisturizer & Lubrication, KY Jelly Water-Based Lube Personal, KY Ukufudumeza Ijeli Lube yobuqu, KY I-Ultragel yaManzi esekwe kwiLubricant, i-KY Yakho kunye neMibini yamaLube, i-KY Inamandla Nceda iGel Lube, i-KY Liquid Water-based Lube I-KY yeNdalo yokuziva iLube yobuNtu ngeAloe Vera
NguMaria; Uhlaziywe ngu-C.Fookes BPharm. Igqityelwe ukuhlaziywa ngoFeb 19, 2019.
Yintoni i-KY Jelly?
I-jeli ye-KY yindawo esekwe emanzini, izinto zokuthambisa eziqhele ukusetyenziswa njengesithambisi sokulalana okanye ukuphulula amalungu esini. Ngokungafaniyo nepetroleum okanye ioyile esekwe kwioyile, ayisebenzi xa kusenziwa iikhondom, iialaphragms, okanye iithoyi zesini. Ngamanye amaxesha i-KY Jelly ingasetyenziselwa ukubambela ijeli ye-ultrasound, ukunceda ukufakwa kwee-suppositories okanye iitampon, ngexesha loviwo lwezonyango, okanye ezinye izizathu.
I-KY Jelly inyibilikiswa ngamanzi kwaye ezona zithako ziphambili zokuthambisa zii-glycerol (glycerine) kunye nehydroxyethylcellulose. Izithako ezibulala intsholongwane kunye nezilondolozi zibandakanya i-chlorhexidine gluconate, i-gluconolactone, i-methylparaben, kunye ne-sodium hydroxide. Izithako zinokwahluka kancinci phakathi kweemveliso ezahlukeneyo zeKY. I-KY Jelly ayinayo nayiphi na imibala eyongeziweyo okanye iziqholo.
I-KY Jelly ayi-greasy kodwa inokuma ngexesha lokusetyenziswa. Iziphumo zokuthambisa zinokuphinda zisebenze ngokudibanisa amanzi okanye amathe. Ngenxa yokuba i-glycerol sesinye sezithako zayo, i-KY Jelly inencasa eswiti kancinci. Ayilonakalisi ilaphu.
Landela yonke imikhombandlela kwileyibhile kunye nokupakisha. Xelela bonke ababoneleli bakho ngezempilo ngazo zonke iimeko zonyango lwakho, izigulo zee-aleji, nawo onke amayeza owasebenzisayo.
Ngaphambi kokuba usebenzise eli yeza
Akufanele usebenzise i-KY Jelly ukuba awuguli kuyo. I-KY Jelly ayizukuthintela izifo ezosulela ngokwabelana ngesondo okanye ukunciphisa umngcipheko wokukhulelwa.
Ukusetyenziswa kwezithambisi zobuqu eziqulethe i-glycerol (enje nge-KY Jelly) kunokubangela usulelo lwegwele kubafazi abaqhelekileyo kubo.
ezimhlophe okweqanda ip 204
Izithako ezinje nge-methylparaben (equlethwe kwi-KY Jelly) zinokubangela ulusu kwabanye abantu.
Buza ugqirha okanye usokhemesti ukuba kukhuselekile na kuwe ukuba usebenzise i-KY Jelly ukuba:
naluphi na uhlobo lokungabikho komzimba
nakuphi na ukusikeka, ukucaphuka, izilonda, okanye amanxeba kufutshane nendawo yakho yobuni okanye kufutshane nendawo oceba ukuyisebenzisa kwi-KY Jelly
ukhulelwe okanye uyancancisa
unesifo esosulela ngokwabelana ngesondo.
Ndingayisebenzisa njani iKY Jelly?
Faka isicelo segrisi oyifunayo ngokuthe ngqo ukusuka kumbhobho ukuya kulusu okanye ikhondom. Faka isicelo kwakhona njengoko kufuneka.
Ukuba ulusu, ipenile, okanye ukucaphuka kwilungu lobufazi kuyakhula, yeka ukusebenzisa i-KY Jelly kwangoko kwaye uhlambe indawo leyo ngamanzi. Funa unyango ukuba ukucaphuka kuyaqhubeka.
I-KY Jelly akufuneki ingeniswe okanye ivunyelwe ukuba inxibelelane namehlo.
Kwimeko yokungenisa ngengozi, hlamba umlomo ngamanzi. Musa ukwenza ukugabha. Funa unyango ukuba iziphumo ezibi zempilo ziyaqhubeka.
Kwimeko yokudibana kwamehlo, hlamba kwangoko ngamanzi kwaye ufune unyango ukuba ukucaphuka kwamehlo kuyaqhubeka.
Gcina kwisitya santlandlolo kwindawo eyomileyo, epholileyo nenomoya kakuhle phakathi kwe-68 ukuya kwi-77 ° F (20 ukuya kuma-25 ° C) kwaye ukhusele kwilanga elithe ngqo nakubushushu. Gcina kude kwizinto ezingahambelaniyo, ukutya neziselo.
Gcina ibhotile, ityhubhu, okanye isitya sivale sivalwe kwaye sitywinwe xa singasetyenziswa. Izikhongozeli ezivulekileyo kufuneka zivalwe ngokutsha kwaye zigcinwe zimi nkqo ukuthintela ukuvuza. Sukugcina kwizikhongozeli ezingenamagama. Lahla ngononophelo ukuthintela ungcoliseko lokusingqongileyo.
wenza ntoni i-levothyroxin
I-KY Jelly inokusetyenziswa xa ifuneka kwaye ayinaso ishedyuli yemihla ngemihla. Funa ingcebiso kugqirha osokhemesti okanye kugqirha ukuba iziphumo zokuthambisa zeKY Jelly azonelanga kwiimfuno zakho.
Khupha umlomo wakho ngamanzi ukuba utya ngengozi i-KY Jelly kwaye ufune unyango ukuba iziphumo ezibi ziyaqhubeka. Kwimeko yokucaphuka kolusu, hlamba loo ndawo ngamanzi kwaye uyeke ukuyisebenzisa. Funa uncedo lonyango ukuba ulusu luyaqhubeka.
Ukuba unayo nayiphi na inkxalabo engxamisekileyo tsalela umnxeba kuNcedo lweNetyhefu ku-1-800-222-1222.
Yintoni endifanele ndiyiphephe ngelixa ndithatha i-KY Jelly?
Kunqande ukufumana i-KY Jelly emehlweni akho, empumlweni, okanye emlonyeni. Ukuba oku kuyenzeka, hlamba ngamanzi.
Iziphumo ebezingalindelekanga zeKY Jelly
Fumana uncedo lwezonyango olungxamisekileyo ukuba unayo nayiphi na le miqondiso yokusabela okwexeshana xa usebenzisa i-KY Jelly: ubunzima bokuphefumla; ukudumba kobuso bakho, imilebe, ulwimi, okanye umqala.
Yeka ukusebenzisa i-KY Jelly kwaye uhlambe indawo echaphazelekayo ngamanzi ukuba ukhula ngokuvutha kakhulu, ukuluma, ubomvu, okanye ukucaphukisa apho imveliso isetyenziswe khona. Shayela ugqirha wakho ukuba ukucaphuka kuyaqhubeka.
Yeka ukusebenzisa i-KY jelly ukuba uvela kwilungu lobufazi (candida) emva kokusebenzisa imveliso. Kubafazi abathile, i-glycerol equlethwe kwi-KY jelly inokubangela usulelo olunjalo. Funa unyango lwe-thrush yelungu lobufazi kwikhemesti okanye kugqirha kwaye uthethe nabo ngezinye izinto zokuthambisa. I-KY Jelly ayinavumba, ayinambala, kwaye ayinabutywala.
Olu ayilo luhlu olupheleleyo lweziphumo ebezingalindelekanga kwaye ezinye zinokwenzeka. Biza ugqirha wakho ufumane iingcebiso zonyango malunga neziphumo ebezingalindelekanga. Unokuxela iziphumo ebezingalindelekanga kwi-FDA ngo-1-800-FDA-1088.
Zeziphi ezinye iziyobisi ezichaphazela i-KY Jelly?
I-KY Jelly, esetyenziswe ngokwezihloko, akunakulindeleka ukuba isebenzisane neziyobisi ozithatha ngomlomo. Nangona kunjalo, inokutshintsha isiphumo sezinye iiarhente zentloko ezisetyenziswe kwindawo enye. Xelela umboneleli wakho wononophelo lwempilo malunga nawo onke amayeza owasebenzisayo, kubandakanya amayeza kunye neyeza zokuthenga, iivithamini kunye neemveliso zamayeza.
I-KY Jelly ikhuselekile ukuyisebenzisa nge-latex kunye ne-polyisoprene condoms, i-diaphragms kunye neethoyi zesini ze-silicone.
I-prednisone 20 mg ithebhulethi
Khumbula ukugcina i-KY Jelly onke amanye amayeza apho abantwana bangenakufikelela khona, ungaze wabelane nabanye ngamayeza akho, kwaye usebenzise eli yeza kuphela xa umiselwe.
Uyiqala njani i-IDLE kwiPython
Thumela iifayile zeOfisi yePolaris njengeZincamathiselo kwiGalaxy S7 yakho
Ungasifaka njani isicelo seZiphumo eziZodwa kunye neFoto Booth kwiMac yakho
Umkhuhlane weHay Fever (Allergic Rhinitis)
Iindidi ezahlukeneyo zeFlats kunye neBobbers
Indlela yokufumana ubuncinci kunye neeNqaku eziPhezulu kwiGrafu
I-Neo-Predef eneTetracaine Powder
Imifanekiso yePilisi yeClonidine
i-augmentin yethamo le-uti
ingakanani i-guaifenesin ikhuselekile ukuba ingathathwa
Izibonelelo zobisi lwe-magnesia
Ingenza ntoni iwotshi yeapile
into esebenzayo kwi-selsun luhlaza